प्रिन्सी एक्कासी गर्भवती हुँदा प्रिज्मा तनावमा (भिडियो सहित) - Nepal Insider
Home/भिडियो/प्रिन्सी एक्कासी गर्भवती हुँदा प्रिज्मा तनावमा (भिडियो सहित)
प्रिन्सी एक्कासी गर्भवती हुँदा प्रिज्मा तनावमा,हस्पिटलमा पत्रकारले घेरेर प्रश्न सोधेपछि के भयो ? टिकटक बाट आम नेपाली माझ हिट भएकी प्रिन्सी र प्रिज्माको जोडी । यो जोडीले बिभिन्न चर्चित गायकहरु सँग काम गर्ने राम्रो अवसरहरु पाएका छन र ति गीतहरु चर्चामा पनि रहेका छन । यसै बिच भर्खर मात्र फेरी अर्को गीतमा काम गर्ने अवसर पाएका छन ।
जुन गीत चर्चित गायक शिव परियारको स्वरमा रहको छ । यो जोडीको यो भन्दा पहिले प्रमोद खरेर र शिशिर भन्डारी सँगको सहकार्य पनि निकै राम्रो बनेको थियो । दुई वटै गीतले दर्शक श्रोताहरुको राम्रो साथ पनि पाएको थियो ।
आज आयुश हस्पिटलमा भएको गीतको म्युजिक भिडियो छायाँकनमा यी दुई टिकटक जोडीको फरक अबतार रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियो पनि चाडै बजारमा आउने गायक शिव परियारले जानकारी दिनुभएको छ । गीतको सम्पुर्ण टिमलाई धेरै भन्दा धेरै बधाइ तथा शुभकामना । हेर्नुहोस उनै टिम सँग गरिएको बिशेष कुराकानी
‘पुडासैनीको देहत्याग गरेको भिडियो हेर्दा मान्छे त्यसरी मर्न सक्दैन, कसैले ह’त्या गरेको हुनु पर्छ’
उच्च अदालतले पनि दियो नायिका शिल्पा र छविलाई पक्राउ गर्न आदेश ! शिल्पा पोखरेल पक्राउ पर्ने लगभग पक्का (भिडियो सहित)….